Nuxurka kujira warmurtiyeedka shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Brussels. – Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka & Dalxiiska
Nuxurka kujira warmurtiyeedka shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Brussels.
By Mohamed Ali Juhaa	 On Jul 23, 2018
Si kastaba ha ahaatee, horusocodka Soomaaliya iskama iman karo. Awoodda hay’adaha dawladda waa in la xoojiyaa, sidoo kalena waa in la abuuraa hannaan isla-xisaabtan oo taageeraya horumarka mustaqbalka. Waxa aan garawsannahay in ay jiraan halisyo carqaladayn kara horumarka hadda la gaarey ee Soomaaliya.
Nuxurka kujira warmurtiyeedka shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Brussels